ग्यास्ट्राइटिसका बिरामीले दशैँमा के खाने के नखाने ?
16th October 2018, 01:01 pm | ३० असोज २०७५
डा. सुरेश क्षेत्री -
नेपालीलाई राम्रैसँग दशैं लागिसकेको छ। मिलेसम्म घरमै खसी काट्ने नभए छिमेकसँग मिल्ने या बजारबाट मासु ल्याएर पकाउने परम्परा नै हो। रातो टीका र जमराको पर्व भनेर चिनिने दशैं मासुबिना टार्न हत्तपत्त नेपालीको मन मान्दैन।
तर, रोग पालेर बसेकाहरुको लागि थोरै सावधानी नअपनाए दशैं दशा बन्न सक्छ। मुटु रोगीको लागि मात्र हैन सामान्य ग्यास्ट्राइटिस लागि धेरै मासु खाँदा केही कुरामा भने ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ। सामान्य कुरालाई वेवास्ता गरे, अस्पतालमा बास हुन सक्छ दशैंमा।
मानव शरीरमा धेरै हुने समस्यामध्ये ग्याष्ट्रिक पनि एक हो। खानपानको असन्तुलन र हेलचेक्राइ गरेमा यो रोग लाग्दछ। चिकित्सकीय भाषामा ‘प्रिभ्रेन्सन इज बेटर द्यान क्युर’ भनिन्छ। त्यसैले रोग लाग्नुभन्दा पहिले सावधानी अपनाए रोग लाग्नै रोक्नु उत्तम हो। ७५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसलाई खानपिनको कारण ग्याष्ट्रिक भएको देखिन्छ।
अहिले ग्यास्ट्राइटिस नभएको मानिस नेपाली हुन सक्दैन भन्ने गरिन्छ। यो एकदम गलत हो। खानपिनमा सन्तुलन गर्‍यो भने ग्यास्ट्राइटिसले छुँदैन। वास्तवमा ग्यास्ट्राइटिस रोग नै होइन। तर, यसले दशैमा धेरैलाई पिरोल्छ।
शारीरिक व्यायम गर्ने, चिल्लो पिरो नखाने र योग गर्ने हो भने ग्यास्ट्राइटिस आफै हराएर जान्छ। तर, ग्यास्ट्राइटिस हुँदा हेलचेक्राइ गर्ने थाल्यो भने अल्सर, क्यान्सर जस्ता खतरनाक रोग लाग्न सक्छ। दशैको बेला चिल्लो पिरो नखाने भन्ने असम्भव जस्तै छ। तर, अरु खानासँग सन्तुलन मिलाएर खाएमा धेरै असर हुन्न। खाली पेटमा र एकैपटक धेरै खानु हुन्न। त्यस्तै पकाउँदा पिरो र चिल्लो कम गर्नुपर्छ।
पेट दुख्ने, पोल्ने र अम्लपित्त हुने लक्षणयुक्त समस्याको चिकित्सकीय नाम ग्यास्ट्राइटिस हो। छाती र पेटबीचको खाल्टो वरिपरी दुख्नु, पेट पोल्नु, भोक हराउनु, अम्लपित बढ्नु नै यसका लक्षण हुन्। ग्यास्ट्राइटिस हुँदा मुख बिग्रिने, पेट भारी हुने, रिंगटा लाग्ने, टाउको दुख्ने र पेट फुल्ने गर्छ।
आमाशयका भित्तामा भएको इन्फ्लायिसन सुन्निएर रातो/तातो भएर दुख्ने समस्या भयो भने आमाशयका भित्ताको श्लेष्म झिल्ली च्यातिएर घाउ हुन्छ। यस्तो अवस्थालाई भने अल्सर भनिन्छ। ग्यास्ट्राइटिस विकराल रुप नै अल्सर हो।
किन हुन्छ ग्याष्ट्रिक?
धेरै चिया तथा कफीको सेवन
शितल पेय पदार्थको बढी सेवन
बढी तैलीय तथा मसालेदार खाना
बिस्कुट, पाउरोटी, बर्गर आदिको नियमित सेवन
चना, राजमा तथा मासको दालको प्रयोग
नशाजन्य वस्तुहरुको प्रयोग
ढिलो सुत्ने तथा ढिलो उठ्ने बानी
एकै पटक बढी खाना खानु
खाना खाँदा पानी पिउनु
ग्यास्ट्राइटिसबाट अल्सर र क्यान्सर हुने हुँदा खानपानमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ।
त्यसो भए के खाने त?
फाइवरयुक्त, भिटामिन युक्त होलग्रेन्स खाना, क्याल्सियम, एन्टी अक्सिडेन्ट, चिकेन, माछा, हरियो सागपात गेडागुडी र अण्डा समय मिलाएर खानुपर्छ।
प्रचुर मात्रामा प्रोटिन युक्त खाना जस्तै माछा, मासु, गेडागुडीले पनि एच पाइलोरी क्रोनिक ग्यास्ट्राइटिसको संक्रमणबाट जोगाउने पत्ता लागेको छ। तर, यसको मात्रा मिलाउनुपर्छ। मासुले ग्यास्ट्राइटिस ठिक हुन्छ भनेर मासु मात्र खानुहुन्न।
दहीमा हुने 'प्रोबायोटिक बटर मिल्क'ले पनि ग्याष्ट्रिकलाई ठिक गर्न सहयोग गर्छ।
अमिलो जातका फलफुल, गेडागुडी, पिडालु, प्याज काउलीमा पाइने फ्लेमोन्वाइडस अनि स्याउ, बेसार, ग्रीन टी, अंगुरमा पाइने पोलीफिनोल्सले पेटको संक्रमण गर्ने एच पाइलोरी व्याक्टेरिया फैलिनबाट जोगाउँछ।
ग्याष्ट्रिकका बिरामीले के नखाने?
कोल्ड ड्रिङ्क्स, चिया, कफी
बढी चिल्लो बोसो भएको खाना
मैदाबाट बनेको खानेकुरा जस्तै पास्ता, सेतो ब्रेड, कुकिज केक, चिनी
धुमपान, मध्यपान, पोलेका मासुहरु।
यसबाहेक अनावश्यक रुपमा दुखाई कम गर्ने पेन किलर औषधीहरु सेवन नगर्ने। सेकुवा लगायतका पोलेका खानेकुरा, मद्यपान र धुमपान नगर्ने। खाना एकैपटक धेरै खानुभन्दा थोरै-थोरै पटक-पटक गरेर खाने। नियमित समयमा सुत्ने र नियमित समयमा उठ्ने कुरालाई इमान्दार भएर पालन गर्ने।
समयमा नै एच पाइलोरी किटाणुको जाँच अनि उपचार गर्ने जसले अल्सर र क्यान्सर जस्तो ठूलो रोगबाट जोगाउँछ। आफन्त, छिमेकी र साथीभाइको कुरा सुनेर प्रमाणित नभएका बिभिन्न औषधीहरु र जडिबुटीको सेवन नगर्ने। विशेषज्ञ डाक्टरसँग जँचाएर उनको सल्लाह अनुसार औषधी सेवन गर्ने र अनुशासित जोनशैली अपनाउने।
ग्यास्ट्राइटिसका बिरामीले दशैँमा के खाने के नखाने ? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।